टिकवाच प्रो मा उत्तम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हुनेछ Androidsis
नेरीआ परेरा | | हाम्रो बारेमा
को लागि बजार स्मार्ट घडी यो बढ्न रोक्दैन। जबकि यो सत्य हो कि एप्पल वाच अझै बिक्रीको स्तरमा उत्कृष्ट विजेता हो, थोरै अन्य निर्माताहरूले कपर्टिनो-आधारित फर्मबाट भुँइ खाइरहेका छन्। र टिकवाच क्षेत्र मा एक महान सन्दर्भ हो।
हामी फर्मको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन पैसाको लागि मूल्य प्रदान गर्दछ जुन हराउन एकदम गाह्रो छ, पहनने योग्यहरूको सूचीमा जुन तपाईंलाई निराश पार्दैन। र अब, हामी जान्दछौं टिकवाच प्रो of को नयाँ विवरण।
र सुरू गर्नका लागि, एक प्रमोशनल छवि लीक भएको छ, जहाँ हामी टिकटवाच प्रो the को डिजाइन देख्न सक्दछौं। यस तरिकामा, फर्मको स्मार्ट घडी सोबर डिजाइनको लागि प्रतिबद्ध छ, जहाँ यसको स्टेनलेस स्टीलको केसको अन्त्य हुनेछ। यो वास्तवमै राम्रो हेर्ने एप्पल वाच प्रतिद्वंद्वी।
अर्कोतर्फ, हामीलाई टिकटवाच प्रो the को प्रक्षेपण मिति र मूल्य पनि थाहा छ। र सावधान रहनुहोस्, हामी अफवाह वा चुहावटको सामना गरिरहेका छैनौं, तर यो अमेजन नै हो जसले गल्तीले आफ्नो वेबसाइटमा फाइल प्रकाशित गरेको छ। यसको लागि यस स्मार्ट वाचलाई रिजर्भ गर्न सक्षम हुनुहोस् जुन बजारमा अक्टूबर १ को मूल्यमा हिट हुनेछ 299,99 यूरो।
सबै भन्दा राम्रो? प्रोसेसर जो माउन्ट गर्दछ। कुनै पनि भन्दा बढी टिकवाच प्रो the स्न्यापड्रैगन वेयर 3१०० एसओसी प्रयोग गर्ने पहिलो स्मार्टवाच होयस प्रकारको पहिरनयोग्यका लागि डिजाइन गरिएको एक चिप। नतिजा? निस्सन्देह उर्जा दक्षता, यो घडीको उत्कृष्ट ब्याट्री छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै।
किनभने, उडानमा घण्टीहरू नदिनुहोस् टिकवाच प्रो Android एन्ड्रोइड वेयरमा चल्नेछ, सुविधाहरूले भरिएको एक अपरेटि system प्रणाली, तर यसलाई एक उल्लेखनीय ब्याट्री खपत आवश्यक पर्दछ। तसर्थ, यस स्मार्टवाचले अधिकतम एक हप्ताको स्वायत्तता प्रदान गर्दछ। तर प्रयोग गरिएको प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै, हामी गुणवत्तामा नयाँ छलांगको सामना गरिरहेका छौं ताकि हामी यस स्मार्टवाचको सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सकौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » टिकवाच प्रो ले यस स्मार्टवाचमा ठूलो स्वायत्तताको प्रतिज्ञा गर्दछ
सेटिंग्स अधिक व्हाट्सएप को उपयोग अधिक सुरक्षित बनाउन